बिन्दु परियार – यो हो मेरो सच्चा कहानी | EuropeNepal.Net
बिन्दु परियार – यो हो मेरो सच्चा कहानी
Europe Nepal Tuesday, June 10, 2014
बिन्दुले यो मेसेज हेम्जाको एउटा क्लबलाइ दिएको बताइएको छ (फोटाहरु भने हामीले थपेका हौँ) ।आजकाल बिन्दुले स्ट्रिप डान्स गर्न छोडेर एउटा रेस्...
बिन्दुले यो मेसेज हेम्जाको एउटा क्लबलाइ दिएको बताइएको छ (फोटाहरु भने हामीले थपेका हौँ) ।आजकाल बिन्दुले स्ट्रिप डान्स गर्न छोडेर एउटा रेस्टुराँमा काम गर्न थालेकी छिन । हामीले यो लेख प्राप्त गर्नु अघि पोस्ट गरिएको यो पेजमा बिन्दुका अरु फोटाहरु छन् ।
Hemja this message to revealaklabalai points (birthdates, we've added haum). Currently points to leavearestaurant strip dance began to work correctly. This article has been posted before we take further reminder of this page are the point.
म बिन्दु परियार , अहिले निकै चर्चाको बिषयमा छु भन्दा केहि फरक नपर्ला । अहिले सम्म मिडियामा जे जस्तो मेरो बारेमा कुरा आए पनि मलाई त्यसको मतलब छैन । हुन पनि मैले यहाँ अमेरिकामा गरेको काम नेपाली सोसाइटिमा नपच्ला र पच्दैन पनि । अब चर्चाकै चासो र मानिसहरुका खुल्दुलीका लागी यो म्यासेज दिन जरुरी ठान्दछु । पढ्ने बुझ्ने यदी नेपालमा जन्मेका छौ र आमाको दुध पिएका छौ भने यो कुरा अवस्य बुझ्ने छौ । मेरो अमेरिकाबाट सबै जनालाई अब आउने दशै र तिहार को शुभकामना ।
I point music, now considered as the most developed countries have some different. Now, as I talk about whatever came to media also means that I do not. I also have to work in the United States there is also the Society napacla and inexpensive. Now carcakai interest and people, and the message is of no relevance to narrow Dogs days. If you areaquick read and understand if you areamother's milk maddening that you understand stationary. All ten of America were to come now, and my best wishes for festival.
फोटो: सन् १९९८ मा बिन्दु (रातो टोपी लाउने फुच्ची नानि), उनकी आमा र टम सेवेल
म धौलागिरी बोर्डइङ स्कुल बाट S.L.C र ज्ञानुबाबा बाट १२ क्लस उतृण गरी अहिले अमेरिका छु । हो मिडियामा आएको केहि कुरा ठीक पनि छ तर सबै हैन । हेमजा मेरो घर हो । बिष्णु पादुका स्कुल मेरो जिवनको दोस्रो स्कुल हो । पोखराको राम बाराही स्कुल बाट बिष्णु पादुकामा गए , त्यहाँ मैले ३ क्लस पास गरेपछी मेरो सानु बाउ जुन आहिले मेरो श्रीमान भनेर चरचामा छन तेसैले मलाई धौलागिरी बोर्डइङ स्कुल मा पढयको हो । मैले १२ पास गरे पनि मलाई मिडिया ले S.L.C समेत उतृण नगरेको भन्दा हासो लाग्यो र कता कता रिस पनि, नेपालमा मैले जस्तो लुगा लगएर हिडेपनि, मलाई नराम्रो नजरले हेरे पनि मेरो घर मा आएको मानिशहरुले मलाई म कस्तो खाले केटी हो भन्ने भुझेको छ । मेरो बारेमा मिडिया मा आएको कुरा सबै ठीक हैन । हो अमेरिकामा मैले Strip क्लब मा काम गरेको हो र बैश हुने बेला सम्म गर्छु । यो डान्स नेपालमा सायद कुनै जिवनमा पनि गर्न नसकिएला र गर्न पनि नपरोस । हो मैले सेक्स पनि गरेको हो जुन अमेरिका मा लिगल छ यो कुरा नेपालमा सबैलाई थाहा छ । म कुनै नेता वा मन्त्री हैन भाषन दिनलाई र दिन पनि चाहन्न ।
अब कुरा गरौ म अमेरिका कसरी आए भन्नु पर्दा मेरो भाज्ञ्य नै होला । मान्छे अमेरिका आउन मात्रै पाए भन्ने कतिले सोच्छन यो कुराम म १००% छु । कुरा के हो भन्दा म यहाँ झुठो आश्वसनमा आए । मेरो सानो बाउ भन्ने मान्छे मेरो सानी आमाको एक्स(ex) बुढो हो । सानी आमासँग ११ वर्ष बसेपछी मेरो दिदी पर्ने सिता परियारलाई ल्यायो ! त्यो बेला दिदी जम्मा १७ वर्षको हुनुहुन्थ्यो । लगेर यहाँ Tom Sewell ले दिदिलाई क्लब मा नचाउन पुरायो । हामी नेपालीलाई त के थाहा हुन्छ र नेपाल मा त छैन Strip क्लब । हुन त आजभोलि बार मा डान्स गरेर आफ्नो जिवन चलाउने दिदिबहिनीहरुलाई त भालु, रन्डी भन्छन भने म त यस्तो क्लब मा काम गरे जहाँ डान्स मात्र नभएर आफुले लगाएको कपडा पनि खोल्नु पर्ने हुन्थ्यो । कारण थियो तेही Tom Sewell । मेरो १२ सम्म पढाउने खर्छ त्यसले नै दिएको थियो जुन मेरो लागी राम्रो थियो । अमेरिका आएर राम्रो लाईफ बनाउने कस्को इच्छा हुँदैन र ? त्यसैले मलाई यहाँ ल्याइयो । आएपछी मैले यहाँ स्कुल गए र GED पास गरे जुन नेपालको +२ जस्तै हो । नर्सिङ पढ्ने इच्छा थियो नेपालमा र त्यहाँ पनि त्यो पुरा हुन सकेन ।Tom ले नै यहाँ अमेरिका मा पढ्औछु भनेर Strip क्लब मा नचाउन बाध्य बनाको हो ।
त्यो क्लब मा काम गर्नु यहाँ ठुलो कुरा हैन तर काम सजिलो छैन । हो यदी राम्रो शरिर र जवनी छ, बोल्न जान्ने छ भने २-४ महिनामा नै करोडपती भाइन्छ ।Tom ले मलाई अमेरिका आउँदा लागेको खर्छ र नेपाल मा हुँदा पढ्आएको खर्छ समेत गरेर ५०,००० । (पचास हजार्) U.S डल्लर माग्यो र नदिए ज्यान मार्ने धम्की समेत दियो । क्लब मा काम गर्दै जादा मैले कमाएको पैसा त्यसले खोस्न थाल्यो । मेरो म्यनेजरले क्लब मा नै पैसा जम्मा गर भनेर मैले त्यहाँ पैसा जम्मा गरेर मेरो परिवरलाई एउटा बस्ने बास बनाइदिए । मेरो लागि परिवार नै ठुलो हो । मान्छेले सोच्लान र प्रश्न गर्लान परिवार को बारेमा सोच्ने भए किन यस्तो गरिस भनेर ? त्यो सब घरी घरी भन्न नपर्ला । हो कमाको पैसा बाट दिन मा २ सय जती जम्मा गरेर मेरो बाबा, आमा लाई बस्ने ठाउँ बनाइदिए । यती धनी भएको भए सायद मैले यस्तो काम गर्न नै पर्दैन थियो होला ।
Tom सँग अहिले कुनै सम्बन्ध छैन । मैले सेक्स भन्ने कुरा गरेको हो । नचाहदा नचाहादै भयो त मैले के गरम ? सेक्स अमेरिकामा इलिगल छैन । यहाँ जस्ले जती बेला गरे पनि कसैले केहि भन्दैन । सेक्स गरेर मैले १ रुपैया पाएको छैन र पाउ भन्ने आशा पनि राख्दिन । थाइल्यन्ड जादा बीच मा विकिनी लगाएको र पोल मा नाचेरको फोटोहरु कुनै नौलो कुरा हैन र त्यस्तो फोटो छाप्ने केटी यो संसारमा म मात्र एक्लो हैन । आफु जुन देश मा छ त्यो देशको सन्कृती र रहनसहन मा बाच्न नजान्ने हो भने यहाँ दुख पाइन्छ । सेक्स यहाँ खुल्ला रुपले गर्छन र पोर्न फिल्म पनि धेरै बनेको छ । पाए र हुन सके पोर्न स्टार बन्नु मा पनि म पछी पर्दिन । जुन कामले तिमी संसारमा बाच्न सक्छौ र त्यस्ले तिमीलाई खुशी दिन्छ त्यो काम तिमीले गर्दा कुनै फरक पर्दैन । यहाँ धेरै छन सेक्स गर्ने र पैसा कमाउने हरु । मैले नेपाल मा नराम्रो काम केहि गरेको छैन र यहाँ पनि गरिन र गर्दिन पनि, यहाँ को काम जसरी चल्छ मैले त्यही गरे ।
मान्छे डाक्टर्, पाइलट्, इनजीनियर बनेर के नै गर्छ र ? त्यही पैसा कै लागि त हो । मैले मान्छे मारेको छैन, गल्ती गरेको छैन भने यो कुरालाई किन सगरमाथा भन्दा नि ठुलो बनाउन पर्‍यो र ? हो थाहा छ नेपाल कि छोरी भएर यस्तो काम गर्न सुहाउदैन तर जुन काम ले तिम्रो बाबु आमालाई सुख हुन्छ त्यो काम गर्दा कुनै नराम्रो हुन्न । हल्लेर, चोरेर, ठगेर, अरुलाई मारेर खानु भन्दा त काम गरेर खानु बेस नि । मेरो कहाँनी भनेर कहिले सिध्धिन्न । अरुलाई यो मार्फत के भन्नु छ भने Tom मेरो बुढो हैन बुवा थियो र त्यो नमरुन्झेल बुवा नै हुनेछ । सेक्स भिडियोहरु मेरो जती पनि बनेका छन त्यो सबै Tom को जबर्जस्तिमा हो । Strip क्लब मा डान्स गर्नु मेरो रहर हैन बध्यता हो यो कुरा भनि राख्न पर्दैन ।
मैले धेरै थोरै कमाएको पैसा मैले मेरो बा, आमा र भाई हरुका लागि खर्छ गरेकी छु ।Tom ले गर्दा यो सबै हुन पुगेको हो । सिता को कुरा ल्यएर मेरो कुरामा जोडी दिंदा मान्छेलाई दोधार भएको छ । सिता र मेरो स्टोरी same same छ । तर हामी दिदी बहिनी Tom बाट धेरै टाढा छौ र खुशी पनि छौ । हो समाजले हामिलाई स्विकार्दैनन तर पनि ठिकै छ जुन समाजले सबै कुरा गलत लिन्छ भने त्यो समाज के समाज ? पढ्ने र बुझ्नेलाई यती म्यसेज भए हुन्छ नबुझ्ने र बुझे पनि बुझ पचाउनेलाई डाडु मा पानी तताएर मरे पनि खासै फरक पर्दैन । विदेशमा आएर दुख पाउन भन्दा नेपाल मा नै मर्नु जाती । मेरो आन्तिम भनाइ यही छ ।
बिन्दुलाई नेपाल जान मन लागे पनि जान मन नलाग्नुको कारण (साथीको नाम मेटिएको र बिन्दुको नाम परिवर्तित)
फोटो – बिन्दु नेपाली पहिरनमा
फोटो – बिन्दु टम सेवेल र अरु दुई थाई युवतीहरु संग थाइल्याण्डमा source- xnepali
EuropeNepal.Net: बिन्दु परियार – यो हो मेरो सच्चा कहानी